Lixabiso Disc isichumisi Umxhubi Machine Suppliers kunye Factory | YiZheng
Oku Disc isichumisi Umxhubi Machine ubukhulu becala isetyenziselwa ukuxuba izinto ngaphandle kwengxaki yentonga ngokusebenzisa ibhodi ye-polypropylene kunye nebhodi engenasici, ineempawu zesakhiwo esihambelanayo, ukusebenza ngokulula, ukuvuselela okufanayo, ukulayishwa okulula kunye nokuhambisa.
Yintoni umatshini wokuDibanisa isicatshulwa sediski?
Inkqubo ye- Disc isichumisi Umxhubi Machine Ixuba izinto zokwenza imveliso, ezibandakanya idiski yokuxuba, ingalo yokuxuba, isakhelo, ibhokisi yebhokisi yezixhobo kunye nendlela yokuhambisa. Iimpawu zayo kukuba kukho isilinda esilungiswe embindini wediski yokuxuba, isiciko sesilinda sicwangcisiwe kwigubu, kwaye ingalo yokuxuba ixhumeke ngokuqinileyo kwisigqubuthelo sesilinda. Isiphelo esinye se-shaft eshukumisayo siqhagamshela kwisigqubuthelo sesilinda sidlula kwisilinda, kwaye ishafti evuselelayo iyaqhutywa. Isigqubuthelo sesilinda sijikeleza, ngaloo ndlela siqhuba ingalo evuselelayo ukuba ijikeleze, kunye nendlela yokuhambisa eqhuba ishafti eshukumisayo ukusuka kumatshini wokuhambisa amanqanaba amane.
Intshi yomlawuli ongaphandle
I-L × W × H
Yintoni umatshini wokuxuba umdibanisi osetyenziselwa yona?
Disc / Pan isichumisi Umxhubi Machine isetyenziselwa ukuvelisa imixube yesichumiso. Umxhubi uvusa ngokulinganayo ngokujikeleza kwaye izinto ezixubileyo ziya kugqithiselwa ngqo kwizixhobo zokuhambisa ziye kwinkqubo elandelayo yemveliso.
Ukusetyenziswa komatshini wokuDibanisa isicatshulwa sediski
Inkqubo ye- Disc isichumisi Umxhubi Machine Unako ukuxuba zonke izinto ekrwada kwi Umxhubi ukufezekisa ngokulinganayo nangokucokisekileyo ukuxuba izinto. Ingasetyenziswa njengesixhobo sokuxuba kunye nokondla kuwo wonke umgca wemveliso yesichumiso.
Izinto eziluncedo ze Disc Umanyolo Umxhubi Machine
Eyona Disc isichumisi Umxhubi Machine Umzimba ufakwe ibhodi ye-polypropylene okanye izinto ezingenasici, ngoko akukho lula ukunamathela kunye nokunxiba okunganyangekiyo. I-cycloid reducer yevili yenaliti ineempawu zesakhiwo esihambelana, ukusebenza ngokulula, ukuvuselela okufanayo, kunye nokukhutshelwa ngokulula.
(1) ubomi inkonzo ende, okonga umbane kunye ugcino lwamandla.
(2) Ubungakanani obuncinci kunye nokukhawuleza okukhawulezayo.
(3) Ukukhutshwa okuqhubekayo ukuhlangabezana neemfuno zemveliso eziqhubekayo zomgca wemveliso yonke.
Idiski yesichumisi Umxube weVidiyo
Ukukhetha Umzekelo Wendlela Yokuxutywa Kwediski
Egqithileyo Umxhubi oxwesileyo oxwesileyo
Okulandelayo: Umxube wesichumisi seBB
Intshayelelo Yintoni iNkanyamba yokuqokelela uthuli? Inkanyamba yePowder Uthuli umqokeleli luhlobo lwesixhobo sokususa uthuli. Umqokeleli wothuli unamandla aphezulu okuqokelela eluthulini ngomxhuzulane othile kunye namasuntswana atyebileyo. Ngokwengxinano yothuli, ubukhulu bezinto ezinothuli zingasetyenziswa njengothuli lokuqala ...
Intshayelelo Yintoni isitshisi samalahle esiCociweyo? I-Pulverized Coal Burner ifanelekile ukufudumeza iifanishi ezahlukeneyo zokufaka umbhobho, iifanitshala ezishushu zokuqhushumba, iifanitshala ezijikelezayo, ubunjani beqokobhe lomlilo, amaziko onyibilikisayo, iifosisi zokuphosa kunye nezinye iifanitshala zokufudumeza ezinxulumene noko. Yimveliso efanelekileyo yokonga umbane kunye nokukhusela okusingqongileyo ...
Intshayelelo Yintoni iTanki lokuVundisa elithe tyaba? Ubushushu obuphezulu beNkunkuma kunye neFurement Fermentation yokuxuba itanki ikakhulu yenza ubushushu obuphezulu be-aerobic yemfuyo kunye ne-inkuku yenkunkuma, inkunkuma yasekhitshini, udaka kunye nenye inkunkuma ngokusebenzisa umsebenzi wee-microorganisms ukufezekisa unyango oludibeneyo ...